Dowladda Nigeria oo aqbashay Safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhin doona dalkaasi.[Sawirro] | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dowladda Nigeria oo aqbashay Safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhin doona dalkaasi.
Dowladda Nigeria oo aqbashay Safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhin doona dalkaasi.[Sawirro]
Madaxweynaha Dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa si rasmi ah uga guddoomay warqadaha aqoonsiga Safiirnimo ee safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkaasi Danjire Jamaal Maxamed Barrow.
Munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta Madaxtooyada dalkaasi Nigeria ayaa waxaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay Safiirka Soomaaliya u magacowday dalkaasi Danjire Jamaal Maxamed Barrow, ayada oo ciidamada Qaranka wadanka Nigeria uu ka qaatay salaam sharafeed gaar ah.
Dowladda Soomaaliya ayaa dib u soo celisay xariirka kala dhaxeeya dowladda Nigeria oo ka mid ah wadamada ugu horreeya Qaaradda Afrika, waxaana Danjire Jamaal Maxamed Barrow horyaala howlo badan oo ah kor u qaadista xariirka labada dowladood iyo soo nooleynta iskaashiga dhaqan dhaqaale ee labada wadan.
Previous articleSafaaradda Soomaaliya ee South Africa oo dalka kusoo celisay muwaadiniin ku xanibnaa dalkaasi.[Sawirro]
Next articleGuddoomiyaha Golaha shacabka oo la kulmay Guddiyada arrimaha Dastuurka.[Sawirro]